Ndị nne na nna were ezigbo iwe - Santa Claus adịghị adị! | Apg29
Ndị nne na nna were ezigbo iwe - Santa Claus adịghị adị!
Egwu ke efu shop. Foto: Youtube / SVT.
"Iji na-nkebi mbụ na-ekwu na Santa adịghị adị nakwa na e nwere ndị okenye bụ ndị yi uwe na-elu bụ nke ukwuu n'ihi anyị."
Na-aghọ aghụghọ na-eduhie umu
Kwa afọ na Christmas oge na-amụta ọtụtụ ndị toro eto ụmụ ha ka ha kwere na ahịhịa - ọbụna ụfọdụ ndị Kraịst. Nke a bụ iji duhie na-eduhie ụmụ ha. Ị kwesịrị ị na-akụziri ha ka ha kwere na ahịhịa ya, ma ị na-enye ha Jesus!
The nkebi mbụ nke biakwa obibia kalenda "Panic ke efu shop" emewo were ezigbo iwe ụfọdụ nne na nna, ee, ọbụna media. Ya bụ na ọ nọ na-atụ aro na Santa adịghị adị!
"Anyị na-eju!" Degaara a nne na nna na SVT si Facebook page mgbe ha hụrụ ihe omume ahụ. "Ụmụ anyị kwere na Santa Claus na ugbu a anyị na-anọdụ ebe a na-nchegbu banyere ajụjụ ga-abụ ihe a."
Ọfọn, ihe nwere ike ị na-ekwu banyere post?
Dị ka ọ bụrụ na-adịghị ezu. Ebe a bụ ihe ndị ọzọ:
"Anyị na-eju! Amaghị ma ọ bụrụ na ụmụ ga-anọgide na-ahụ nke a bụ eziokwu. "
Donald trumps Eziokwu
O yiri ka ọ dị nnọọ mwute na ajụjụ Santa dị adị. N'afọ gara aga, ọbụna US President Donald opi a buut na ọ jụrụ ya ajụjụ ahụ na saịtị dị adị.
7 afọ Collman Lloyd bịakwutere Donald opi na ekwentị-na na ibé. Ọ na-eche ma ọ bụrụ na ma eleghị anya, na ọ bụ agadi nke ukwuu kwere na Santa, ma a na ezinụlọ ọrụ mere ka ya ugbu a na-na-ajụ Santa dị adị.
Gịnị ma ọ bụrụ na ndị okenye nwere ike ọ gaghị enyere ma na indoctrinate ụmụ ha na a ụgha! Gịnị ka ha tua egwu nke? The eziokwu n'ezie bụ na Santa Claus adịghị adị?
"Ghara Ụgha ka ha ruo ọtụtụ afọ"
Akụkọ "A ebube ụgha" dee ọkachamara Boyle na McKay na ndị nne na nna na-agwa anyị na Santa Claus bụ nwere ike imebi mmekọrịta ha na ụmụ ha. Ọ nwere ike n'ịwa na nwa na-eche nke nne na nna ha na ndị ọzọ.
"All ụmụ ga-emecha chọpụta na ha na a na-agha ụgha ha ruo ọtụtụ afọ, na nke a nwere ike ime ka ha na-eche ihe ihe ndị ọzọ ha mụtara nke nwekwara ndị a bụ ụgha", ka Prọfesọ Boyle.
"Ọ bụrụ na Santa Claus na-adịghị adị, e nwere fairies? Bụ anwansi? Bụ Chineke? Ọ bụrụ na ndị nne na nna na-enwe ike ụgha banyere ihe otú ahụ pụrụ iche na kpokọtara, nwere ike ha n'ezie obi dị ka protectors nke amamihe na eziokwu? The omume ga-esi ụmụaka ka ha kwere na ụdị akụkọ ifo ga-ajụjụ, "dere ọkachamara na akụkọ.
Nke a bụ ya mere na ọ dị mma na-akụziri ha eziokwu banyere Jizọs na ọ bụghị ụgha nke ala. Mgbe ahụ, ha nwere ike mgbe niile ịdabere na, ihe i kwuru bụ eziokwu, ha na obi ike ha ga-ofu.
M chee na elf-nkwenkwe bụ ihe dị mkpa n'ihi na ndị okenye karịa maka ụmụaka. E nwere mgbe ụfọdụ mgbagwoju anya okenye ndị kwere na Santa Claus, ma ọtụtụ na-adịghị. Gịnị mere anyị kwesịrị ịdị na ụmụ nke a?
A ụbọchị tupu Christmas Eve 2007, m dere banyere ndị dị otú ahụ a mgbagwoju anya onye - a Asatru onye na-ekwere na Santa Claus. O na-ekwere na Santa bụ mmụọ bu onye o nwere n'ụlọ ya. Ọ na-akọwa a demon!
Nke a bụ ezi nkọwa na Santa Claus bụ n'ezie maka ihe ọ bụla. Santa Claus bụ ihe ọjọọ spirit onye chọrọ ka eduhie ndị mmadụ kwere na ya kama Jesus!
St. Nicholas bụ bishọp nke Myra ke n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ Lill-Asia na 300 si. Ọ e kwuru a senti n'ihi na ọ bụ na-emesapụ aka.
Ọ bụ kwuru na ọ zọpụtara ndị inyom na-agba akwụna site n'inye ha gold ego. Ọ mesịrị ghọọ ụmụ akwụkwọ si nchebe senti.
St. Nicholas mere ọtụtụ omume dị ka akụkọ mgbe. Ozugbo ọ zọpụtara otu ezinụlọ si ubiam site atụba ego ha n'abalị. N'ihi ya nye onyinye dị ka taa Santa Claus!
Ma Nicholas bụ nakwa na ike nke Chineke na na nwụrụ anwụ. Ọ ọbụna napụtara-akwọ ụgbọ mmiri ndị na-ala n'iyi dị na oké ifufe.
Mgbe Nicholas e beatified, enye ama ibido ọtụtụ acclaimed site na-akwọ ụgbọ mmiri.
Ụbọchị ya firads December 6 na Christmas play na Catholic ụlọ akwụkwọ. The ụmụaka ndị nwere ezigbo nwetara onyinye.
Ndị onye na-enwebeghị ọma ma ọ bụ ihe bara nnọọ mischievous nwetara a uto nke osikapa site a ekwensu ọgụgụ yi uwe dị ka Saint Nicholas ada.
Na English na-ekwu okwu mba maara dị ka Santa Claus Santa Claus mgbe St. Nicholas.
N'oge nchèghari mgbe kagburu senti ofufe ike kwusi St. Nicholas, n'ihi na ya ewu ewu.
Mgbe ahụ, ha mere ya na-Santa Claus! Ọ bụ mgbe ahụ na-enweghị a bishop okpu.
Chronologically, a ruo eruo ọma n'ihi na Nicholas ama akpa ke December. Ugbu a, ọ e jikọtara ya na Christmas na onyinye-enye dị ka Santa Claus.
nwụrụ anwụ nsọ
Taa heresy nke Santa Claus sitere otú si ọzọ heresy na nke taa abụghị ihe ọzọ karịa a nwụrụ anwụ senti.
Site 2017, akwụkwọ akụkọ dere, sị ụwa akụkọ ihe mere eme na ọ hụrụ a pelvic ọkpụkpụ si Nicolaus.
The ike nke foduru nke Santa Claus kwuru na na-na nnukwu ụlọ ụka Senti di San Nicola Southern Italy. Ọ bụ a obere, taa onye nke banyere 150 sentimita.
Ya mere ọ bụrụ Santa Claus na niile kemgbe, ọ na-ekwe nkwa na ọnwụ taa! Na Catholic ụwa na-eme ememe ọnwụ ya na December 6 oké ememe.
N'ihi na ọtụtụ ndị Santa Claus bụ nnọọ a chepụtara echepụta agwa na-akụziri ụmụaka ka ha kwere na na itinye onwe ya mere nke ukwuu mesiri ike na ya.
Ha na-ekwu na ọ pụtara na ihe ọ bụla, ma gịnị mere na ọ bụ otu n'ime ndị nnukwu nsogbu oge banyere ya? Gịnị mere na ha na-akụzi mgbe ụmụaka kwere na ya?
Santa Claus na-e sere na karịrị ike mmadụ, ọ bụ "maara ihe nile" n'echiche bụ na ọ maara na ọ bụrụ na ụmụ ezigbo, ọ bụkwa "ubiquitous".
Ọ na-kọwara dị ka obiọma na ofụri "nti" na dị nnọọ furu na otutu nke onyinye na onyinye.
Na ndị ọzọ okwu, a chi! Nke a na-n'ụzọ doro anya hụrụ mgbe na-amụ foto nke ya. Ọ anya dị ka a chi - arụsị!
Taa Santa Claus bụ a mgbagwoju anya si atọ dị iche iche ebube. A Catholic senti, ndị vresige yad ibé si nwoke onye oru ugbo oha na Christmas ewu!
Gịnị ka okwu ahụ "brownie"? Okwu bụ a mkpọbiri nke ibé bisse. Ọ bụ ụdị oghere na olumba bise. Ọ pụtara isi, top nkịta, ma ọ bụ ọbụna strawberry.
Ònye ka anyị na-efe na Christmases?
Ọtụtụ afọ gara aga, m nụrụ a anọ afọ nwata sịnụ, "m kwere na Jizọs ma ọ bụghị Santa Claus." Ọ bụ a maara ihe nwa.
Ma ụfọdụ ndị toro eto na-adịghị ka ihe ga-dị ka ndị maara dị ka ha afọ mgbe afọ, ndọrọ nke obere ụmụaka na ahịhịa n'ebe ahụ. Aghọtaghị m ihe mere na ọ bụ otú ahụ dị mkpa iji nweta ụmụaka ikwere na Santa. Ụmụaka nwere dịghị tomtetro ruo mgbe ndị okenye ezobe na ha n'ebe ahụ. Ma ụmụaka nile nwere a kwere na Chineke n'obi ha na ha tupu ha nụrụ banyere Chineke na Jizọs dị ka nnyocha. Nchọpụta a na-egosi na Bible na-na Ecclesiastes 3:11.
Onye anyị na-ekwusa banyere Christmases, na onye anyị na-efe? Ọ bụ oge na-ekwu okwu banyere Jesus. N'eziokwu, ọ bụ ihe mere eme na ọ bụ na Christmas, a mụrụ Jizọs. Ma, ọ bụ dokwara mere eme na a mụrụ ya!
Na na Christmases anyị na-emekarị mesie ya ike na a mụrụ Jizọs n'ụwa. Gịnị mere e ji a mụrụ ya? A mụrụ ya na-azọpụta - zọpụta m na gị. O mere nke a site na-anwụ anwụ na-ebili.
Ònye n'ezie na-abịa onyinye?
Ọ bụ oge anyị na-agwa ụmụ anyị na anyị bụ na-aga na-eme ememe na Christmases. Ma ọ bụ nakwa oge ịgwa ụmụ anyị ndị ya n'ezie na-abịa onyinye.
James 1:17. Ọma ọ bụla na ihe ọ bụla zuru okè onyinye si n'elu, na-abịa si na Nna nke ìhè, na onye ọ dịghị mgbanwe emee ọ ịmafe n'etiti ìhè na ọchịchịrị.
Na onyinye e nyere na-erughịrị mmadụ ma anyị bụ ndị obiọma, mara mma na nkà!
The onyinye kasịnụ bụ Jizọs Kraịst, bụ onye Chineke zitere n'ime ụwa. Mgbe anyị na-anakwere Jizọs dị ka Onyenwe anyị, anyị-azọpụta ma na-niile ịgbaghara anyị mmehie anyị.